shankalay13: July 2009
အလုပ်ရှင်က အတွင်းရေးမှူးမကို ပြောသည်။ ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကို တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထား။
အတွင်းရေးမှူးမက သူ့ယောင်္ကျားထံ ဖုန်းဆက်၏။ ကျွန်မ သူဌေးနဲ့ ကျွန်မနိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ် ။ ရှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြည့်နေနော် ယောကျာင်္းက သူ့တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူထံဖုန်းခေါ်သည်။
ကိုယ့်မိန်းမ နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တို့ တစ်ပတ်လုံး အတူနေကြရအောင်။
တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက သူမ သီးသန့်ကျူရှင်ပေးနေသော ကောင်လေးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါတစ်ပတ်လောက် အလုပ် လုပ်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းစာလာသင်စရာ မလိုဘူး။
ကောင်လေးကသူ့အဘိုးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး၊ ကျွန်တော့်ဆရာမ အလုပ်များနေလို့ တစ်ပတ်လောက် စာမသင်ရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပတ်လုံးနေပြီး အချိန်ဖြုန်းရအောင်။
အဘိုး(အလုပ်ရှင်သူဌေး)က သူ့အတွင်းရေးမှူးကို ဖုန်းဆက်သည်။ ဒီအပတ်ငါမြေးနဲ့အချိန်ဖြုန်းရမယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို
အတွင်းရေမှူးက သူ့ယောင်္ကျားကို ဖုန်းခေါ်သည်။ ကျွန်မအလုပ်ရှင်က ဒီတစ်ပတ်ထဲ လုပ်စရာလေးတွေရှိတယ်။ ခရီးစဉ်ကို ဖြက်လိုက်တယ်။
ယောင်္ကျားကသု့တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါတို့ ဒီတစ်ပတ် အတူတူအချိန်မဖြုန်းနိုင်တော့ဘူး ။ ငါ့မိန်းမ ခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တယ်။
တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက ကျူရှင်သင်ပေးနေသည့် ကောင်လေးထံ ဖုန်းခေါ်သည်။ ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ ပုံမှန်အတိုင်းစာသင်ဖို့ရှိတယ်။
ကောင်လေးက သူ့အဘိုးထံဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောတယ်။ ကျူရှင်တက်ရမယ်တဲ့ အဘိုးနဲ့ အဖော်မလူပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အဘိုး (အလုပ်ရှင်)က သူ့အတွင်းရေးမှူးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။အဲဒီ အစည်းအဝေးကို ဒီတစ်ပတ် ဒို့တက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထားလိုက်။
အဲဒါကို မဆုတ်သာမတိုးသာ အခြေအနေဟု ခေါ်ရပေမည်။
ဒါနဲ့..နေပါအုန်း..နေပါအုန်း. ..မင်းကဘာလို. အရက်ကိုအလွန်အကျွှံ သောက်ရတာလဲ?
သူရမေရာကံ ကျူးလွန်ပြီး...အခြားကံ ၄ပါးလုံအောင်လို.ပါ...
ဘာကွ! သူရာမေရကံ ကျူးလွန်ပြီး....အခြားကံ ၄ ပါးပါ ချိူးဖောက်တာ မဟုတ်ဘူးလား?..
ဘယ့်နဲ့ချုိုးဖောက်ရမှာလဲ..ဗျာ.. အေ့..။ တကယ်သောက်ကြည်.ပါလား...အရက်မူးလွန်လို့ သူများကိုလိမ်ဖို.မပြောနဲ့ 
ကိုယ်.ရှာအလုံးကြီးကိုပြန်မကိုက်မိအောင်လို့ မနဲ ထိန်းထားရတယ်....အေ့...။ အေ့!
မအေ့နဲ့တချို့ ဆို အမူးလွန်းပြီး အမှန်တိုင်း ပြောမိလို့ကျွှဲခိုးပေါ်တာရှိသေး..အေ့။ အဲ!
မအဲ့နဲ့ လေ..နေအုန်းရှိသေးတယ်..သူတပါးပိုက်ဆံခိုးဖို.မပြောနဲ့ကိုယ့်အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံတောင် ဘယ်ကောင် နှိက်သွားမှန်း မသိလို့ပျောက်ရတာအကြိမ်ကြိမ်...အေ့ ။
မဟင်နဲ့ အုန်း..ကျန်သေးတယ်...သူတစ်ပါးအသက်သတ်ဖို.မပြောနဲ့ကိုယ်ဘာသာကို မရပ်နိုင်လို့ဓာတ်တိုင်ဖတ်ထားရ တာဘဲ ကြည့်တော့...အေ့..။
မသြော်နဲ့ မပြီးသေးဘူး။ သူများသားမယားကိုပြစ်မှားဖို.ဆိုဝေးရော...နိုင်ငံခြားမှာ ဖြစ်ဖူးတယ်...အမူးလွန်ပြီး ပန်းခြံထဲမှာ အိပ်နေတာ ကိုယ့်ဖင်ထဲကို မြွေဝင်သွားမှန်း တောင်မသိဘူး...အေ့..။
မင်ပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုဘဲ......ငါလည်း ကံ၎ပါး လုံအောင် အရက်သောက်ရမလိုဖြစ်နေပြီ အရက်ဆိုင် သွားအုံန်းမှ.....။
တစ်ချက် ရီရင် တစ်ချက်ပျော်နိင်ပါစေ...။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:15 AM No comments:
'ဆယ်ကြိမ်၊ ထမင်းစားပြီးတိုင်း တစ်ခါသောက်လို့ ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေ"
စိတ္တဇဆေးရုံ တစ်ခုမှာ ဆရာဝန်တွေဟာ ပြန်ကောင်းလာတဲ့ လူနာတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့စဉ်းစာကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့ဟာစမ်းသပ်မှုတစ်ခု လုပ်ကြပါတယ်။
Video ပြစက်ရှေ့ မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်ခုံတွေကိုဆေးသုတ် ပြီးတော့သူတို့ ကို Video ပြပါတယ်။ ဘယ်သူကများ ဆေးသုတ်တာကို သိမလဲ လို့ စမ်းသပ်တာပါ။ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကတော့ ထိုင်ခုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ထိုင်ခုံမှာဖြန့်ခင်း ပြီးမှထိုင်တယ်။
ဆရာဝန်တွေက ဒီလူတော့ရောဂါပျောက်သွား ပြီဆိုပြီး အိမ်ကို ပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ သူမိန်းမ ကမေးတယ်။
"ရှင် ထိုင်ခုံတွေမှာ ဆေးသုတ်ထားတယ်ဆိုတာသိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား?, ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ"
"ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ...ငါကအရပ်ပုလို့ထိုင်ခုံမှာသတင်းစာခုပြီးထိုင်တာဟ..."
မေးသူ။ ။ ဟင့်အင်း ။ ဒါဆိုဆရာမှားသွားပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ စုစုပေါင်းကလေး ငါးယောက်တောင် ရှိပါတယ်။
ဗေဒင်ဆရာ။ ။ ဘာလဲ ခင်ဗျာက သူတို့အားလုံးရဲ့ ဖခင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေတယ်ပေါ့လေ?။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:03 AM No comments:
တခါက လူနှစ်ယောက်ဟာတောထဲမှာမျက်စိလည် လမ်းမှားပြီးလမ်းပျောက်နေပါတယ်။ ဒါကိုသစ်ခုတ်သမားတစ်ယောက်ကကယ်ပြီး အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်။ညရောက်တော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက် ကသစ်ခုတ်သမားရဲ့သမီးကို-------တယ်။ ဒါနဲ့သစ်ခုတ်သမားလည်းအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးသတ်မယ်လုပ်ပါရော။
အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်လည်း သစ်ခုတ်သမားကိုမသတ်ဖို့ဒူးထောက် တောင်းပန်တာပေါ့။ဒါနဲ့ သစ်ခုတ်သမားလည်းအခွင့်အရေးပေးတဲ့ အနေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ခြံထဲမှာရှိတဲ့ သစ်သီး၁၀လုံးစီ ခူးခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။မကြာခင်မှာ ပထမလူက မက်မန်းသီး၁၀လုံး ကိုယူပြီးပြန်လာပါတယ်၊
သစ်ခုတ်သမားက အဲ့ဒီမက်မန်းသီးကို မင်းရဲ့ဖင်ပေါက်ထဲကိုထည့်ရမယ်၊ တကယ်လို့ ၁၀လုံးလုံးထဲ့ပြီးတာတောင်တစ်ချက်မှ မရယ်ရင် အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ပထမလူလည်းထဲ့နေတာ ၉လုံးမြောက်လည်းရောက်ရော အားပါးတရရယ်လိုက်လို့ သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ယမမင်းဆီကိုရောက်တော့ ယမမင်းက "မင်းကွာ၊ နောက်နှစ်လုံးသည်းခံလိုက် ရင် မင်းသေစရာမလိုတော့ဘူး၊ဘာကြောင့် ရယ်ရတာလဲ"လို့ မေးတော့ ပထမလူက အရယ်ကိုမရပ်နိုင်သေးဘဲ..................
"ယမမင်းကြီး ၊ကျတော်မျိုး မရယ်ဘဲနဲ့၁၀လုံးလုံးထဲ့နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၉လုံးမြောက်မှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကဒူးရင်းသီး၁၀လုံးကို
မနီသည် အတန်းထဲတွင် အမြဲအိပ်ငိုက် လေ့ ရှိ သည်။ တစ်နေ့ မနီအိပ်ပျော်နေစဉ်ဆရာမက ပေးသည်မှာ
ဆရာမ။ ။ မနီကမ္ဘာကြီး ကိုဘယ်သူ ဖန်ဆင်းခဲ့လဲ?
မနီ အိပ်အိုက်နေသဖြင့် မကြားသောကြောင့် သူမ နောက်တွင် ထိုင်နေသော ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍သတိ ပေးလိုက် သည်။ ထိုအခါ
မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" (လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက် သူမပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။
ဆရာမ။ ။ တော် လိုက် တာ၊ နောက် တစ်ခု ထပ်မေးမယ်၊ တို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် က ဘယ်သူလဲသမီး?
ဆရာမမေး သည် ကို မနီမ မကြား ၊ အိပ်လို့ ကောင်းနေသည် ၊ ထို့ ကြောင့်ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်ဖြင့် ထိုး၍ သတိ ပေး ရပြန် သည်။
မနီ။ ။ (လန့်သွားပြန် သဖြင့်ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေသည် ) " ဂျီးဆပ် ခရစ်"
ဆရာမ။ ။ မှန်ပါတယ်၊ ဆရာမ နောက်ဆုံးတစ်ခု မေးချင် တာ ကတော့ ၂၃ ယောက်မြောက်ကလေး မွေးပြီးတဲ့နောက် မှာ ဧဝ က အာဒမ် ကို ဘာပြောခဲ့လဲ? ။
ဒီတစ်ခါ တော့ ကိုဖြိုး အိပ်ပျော်နေသော မနီကို ဘောပင်နှင့် နာနာ ထိုး၍သတိပေးလိုက်သည်။မနီမှာ အတော်နာ သွားသည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်ယာ မှ နိုးလာသဖြင့် ရုတ်တရတ် ထလိုက် ကာ
မနီ။ ။ နောက်တစ်ခါ ငါ့ ကိုထပ် ထိုးရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့်ဟာကို ထက်ပိုင်းချိုးပစ်မယ်
ဆရာမခမျာ ဘုမသိဘမသိ ဖြင့် သတိလစ် သွား ရှာသည်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:51 AM No comments:
“ကျွန်မက မောင့်လက်မှတ်လို့ ကြည့်နေလိုက်တာ”
“ဟုတ်ကဲ့ သိပါတယ်ခင်ဗျ၊ အခုကျွန်တော့်အ်ိမ်ဘေးမှာမီးလော င်နေပါတယ်။
ရှမ်းကလေး ( ပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်လျက်)
အကယ်၍ မင်းတယောက်သောသူကိုမချစ်တော့ဘူးဆို၇င်လမ်းခွဲံလိုက်ပါ။ သူများကသူ့ ကိုချစ်ဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပါ....
အကယ်၍ မင်းချစ်သူကမင်းကိုထားသွားရင်စိတ်လျော့လိုက်ပါ။ တခြားတယောက်ကိုချစ်ဖို့အခွင့်အရေးရတာပေ့ါ။
ယောက်ကျားလေးတွေငိုတာတကယ်ချစ်လို့ဖြစ်တယ် ။ မိန်းကလေးတွေငိုတာတကယ်စွန့်လွှတ်ရလို့ဖြစ်တယ်တဲ့။
ချစ်ခြင်းနှင့်ရေစက်ဆုံခြင်း ရှိခဲ့ရင်တော့ အောက်ကအချက်လေးတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါလေ။
ရှမ်းကလေး ( email မှစာအားပြန်၍ တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 4:48 AM No comments:
တစ်ယောက်ထဲငိုင်လို့တွေးတောမိခဲ့တယ်
အတွဲတွေ့ တိုင်းလဲ မနာလိုဖြစ်နေ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:37 AM No comments:
တစ်ခါကခိုးမှု ကိစ္စမှာ ခိုးရာပါပစ္စည်းနှင့်အတူ လက်ပူးလက်ကျပ်မိတဲ့ တရားခံတစ်ယောက် ရုံးရောက်လာ၏။ တရားသူကြီးမေးသော အခါတွင်....
္ဒ‘မင်းဘာလို့ ငြင်းတာလဲ? ခိုးရာပါပစ္စည်း ကက်ဆက်နဲ့ အတူမိထားတယ်လို့စွဲဆိုထားပါလား?‘
‘မင်းကမခိုးဘူးလို့ သာပြောနေတယ် မင်းလက်ထဲက ပစ္စည်းက ဘယ်သူ့ ပစ္စည်းလဲကွ?‘
‘ဟ အဲဒီအိမ်ကပစ္စည်း မင်းလက်ထဲမှာရှိတော့ မင်းခိုးလာတာပေါ့ကွ‘
‘ယူလာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အသွားမှာ အဖမ်းခံရတာပါ။ အဲဒီ ကက်ဆက်က ပျက်နေလို့ လေ‘
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:19 AM No comments:
ကြယ်တွေကြွေတိုင်း လိုက်လို့ ဆုတောင်း
အချစ်အကြောင်း ရေးဖွဲ့ နေစဲ။
နေ့ တွေဆုံးလို့ရက်တွေလဲပြောင်း
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:25 AM No comments:
သွေးတာဖေါက်လို့အစွမ်းပြမယ်
အာခေါင်ဟစ်လို့ရေးခြစ်ခဲ့တာ
ခုချိန်လေးမှာ သူလေးပစ်လို့ 
ဒီနှလုံးသား ရေတွေလျှံလို့ 
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:20 AM No comments:
ယနေ့ လခထုတ်သဖြင့် ကျနော်သည် မိန်းမသိမ်းယူခြင်းမပြုမီ တစ်ဝိုင်းလောက်ထောင်မည်ဟု တွေးတောကာ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် နှင့် ချီတက်ခဲ့လေသည်။ သောက်ရင်း သောက်ရင်းနှင့် တစ်ချို့ မှာမူးလာသော်လဲ မမူးသေးသည့် ကျနော်နှင့် တစ်ချို့ အရက်တွင်း များသည် ဘီအီးထပ်၍ ဖြည့်စွက်ရန် ထပ်၍ ချီတက်ခဲ့သည်။ မူးပြီးသောသူများနှင့် မ.ယ.က (မယားကြောက်) များကတော့ ကိုယ့်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာသို့ကြွသွားလေ၏။
မိန်းမအား လခပြန်မပေးပါက ထမင်းငတ်ကာ ကိုယ့်ဝမ်းကို ကိုယ်ပြန်ကျောင်းရမည့်ကိန်းကို မြင်ရောင်သဖြင့် ကျနော်သည် လခ တစ်ချို့ ကိုသိမ်းထား၏။ သို့ သော် အရက်သောက်သည် ဆိုသည်မှာ မူးချင်လို့ သောက်သာပဲကွ၊ မမူးချင်ရင် ရေပဲသောက်နေတော့ မပေါ့ ဆိုသည့်မူကို ကိုင်သည့်အလျောက် ဘီအီးအား ရေများများရောကာ ပဲလော် ဖြင့်သာဖျော နေတော့သည်။
သို့ နှင့်ရေချိန်ကိုက်၍ လွန်သွားရာ အိမ်သို့စစ်ကြောင်းပြောင်း၍ ချီတက်ခဲ့စဉ် အိမ်မပြန်ရောက်မီ ပဲလော်က အစွမ်းပြသဖြင့် နီးရာသို့ သာ စခန်းသွားရန် ချုံပုတ်ထဲ ကိုယ်ရောက်ဖျောက်လိုက်သည်။
သို့ သော် ကံမကောင်းစွာဖြင့် ကိစ္စမပြီးခင်တွင် လှည့်လည်နေသော ရဲသားတစ်ဦးနှင့် တွေ့ သောအခါ၊ ရဲက ‘ဟေ့လူ ဘာလုပ်နေတာ လဲဗျ?‘ ဟုမေးသောအခါ ကြောက်ကြောက်နှင့် ကျနော်က ‘အီ အီး...အိ ပါ..ပါ..နေတာပါဗျာ‘ ဟု ကြောက်ကြောက်နှင့် ၀က်သံလိုလို ဖြေမိသွား၏။
ဇွဲရှိသောရှဲကလဲ ‘ခင်ဗျားက ဘာလို့ မှောင်ရိပ်ခိုနေတာလဲဗျ?‘၊ ‘ခက်ပြီ အလေးသွားနေပါတာယ်ဆိုမှ လမ်းမ ပေါ်မှာပါရမှာလား လို့ ။ အဲ မီးအမြဲပျက်နေတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာပါရင်လဲ မီးမပါတဲ့ကားတွေတက်ကြိတ်လို့အီအီးနဲ့တစ်ထေရာထဲ ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ဗျ‘ ဟု အရှိန်နှင့် ခပ်ဆက်ဆက်ဖြေလိုက်၏။
ထိုအခါ ကျနော့်ထက်ဇွဲပိုကောင်းသော ရဲလေးက ‘ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားမှာ ဘာသက်သေရှိလဲဗျ?‘ ရော..ခက်ပါပေ့။ သူ့ ကိုယ်သူ တရားသူကြီးများ မှတ်နေလားမသိ။ သို့ သော် ကျနော်လည်း တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားအရ ‘သက်သေဟုတ်လား? ဒီမှာလေ ဆရာရဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရှိနေသေးတယ်၊ ပူပူနွေးနွေးလေး ပုံနေတာလေဆရာရဲ့ ။ ဒါမှမကျေနပ်သေးရင်လဲ ဟောဒီလေးမှာ ထိုးကြည့် လိုက်ပါ ဓါတ်မီးလေးနဲ့သုတ်တောင် မသုတ်ရသေးဘူးဗျ‘။
ကျနော့်စကားကြောင့် ရဲလေးသည် စိတ်ဆိုးသွားကာ ‘ခင်ဗျားက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကို စော်ကားတယ်ပေါ့လေ။ ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားကို ကျနော်တာဝန်အရ အရေးယူရမယ်ဗျ။ ကဲ...ခင်ဗျား 5/ည နဲ့ သွားချင်လား၊ မှောင်ရိပ်ခိုမှုနဲ့ရုံးတင်တာ ခံချင်လား ပြောဗျာ။‘ တဲ့။ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေများဗျာ တာဝန်သိတတ်လိုက်တာ။ အင်း...ဒင်းတို့ တွေ နှစ်ချုပ်အမှုများများလိုချင်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်လေ။ မထူးတော့ဘူးလေ ဖြစ်သမျှအကောင်းပဲမှတ်လိုက်တော့မယ်။
ဟင်း...ဟင်း...မှောင်ရိပ်ခိုတဲ့အမှုကကြီးနိုင်တယ်၊ ဒီတော့ 5/ည ဆိုရင်5ရက်ပဲအိပ်ရမှာ မဆိုးဘူး။ 5/ည နဲ့ ပဲသွားတော့ မယ်ဟု ရင်ဘတ်ကော့ကာ ရဲနောက်တို့ကောက်ကောက်ပါသွားတော့၏။ သို့ နှင့် 5/ည ဖြင့်ပါလာသော်လဲ ကျနော်သည် ထောင်ထဲတွင် တစ်လ ကျော်ကျော်နေလိုက်ရပါသည်။
ထောင်တွင်း၌ မည်သို့ သော အယူအဆရှိသည်တော့မသိပါ၊ သို့ သော် ကျနော့်၏သိပ်မသန်သော ဆံပင်များကို ရိပ်ပေးလိုက်ပါသေးသည်။ ထို့ ပြင်ရိပ်သော ဓါးသည် တစ်ခေါက်သုံး မဟုတ်ပဲ၊ အလောင်းမင်းတရားလက်ထပ်ထဲက သုံးလာသော ဓါးများဖြစ်လေရာ ရောဂါများစွာ ထိုဓါးပေါ်တွင် ကျက်စား တွယ်ကပ်နေပေလိမ့်မည်။
သို့ နှင့် ထောင်မှထွက်ပြီးကျနော်သည် လိမ္မာစွာဖြင့် လခကို ပုံမှန်အပ်ပါသော်လည်း မကြာခဏ ဖျားနာလာသဖြင့် သွားရောက်စစ် ဆေးရာ ကျနော့်တွင် HIV အပေါင်းလက္ခဏာ ရှိသည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာတွေ့ ရှိလိုက်ပါသည်။ ကျနော်သည် ငါးပါးသီလ အားလုံးအား လုံအောင်မစောင့်နိုင်သော်လည်း သူတစ်ပါး သား၊သမီး၊ဇနီး၊မယား များဖြင့်မကျူးလွန်ပါ။
ထို့ ကြောင့် ကျနော်ရရှိသော ရောဂါသည် ထိုနေ့ က မိန်းမအားလခ အပြည့်မပေးပဲ အရက်သွားသောက်၍ရလာသော ရောဂါများဖြစ်နေသလား?................
ရှမ်းကလေး (ဖတ်ဖူးသော ဟာသစာအုပ်တစ်ခုမှ ပြန်မှတ်မိသမျှဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။ ရေးသူနှင့် စာအုပ်နာမည် မမှတ်မိပါ။ )
The Road Film from David Schulz on Vimeo.
Posted by Shankalay or Sai Sai at 12:16 AM No comments:
တစ်ခါတစ်လေများဗျာ သူများနိုင်ငံရောက်တော့ သူများအစာတွေစားရင်းအီလာသာနဲ့ကိုယ့်မြို့ ရွာက ဟင်းတွေကို ရည်မှန်းပြီး သွားရည်လည်လာတဲ့ အချိန်တွေလဲရှိပါတယ်လေ။
ငါးပိထောင်းတို့ ၊ ငါးပိရည်တို့ဆိုရင်လဲ ငါးပိက ဘယ်မှာ ရှာရမှန်းကလဲမသိ။ ဒါကြောင့် ကျနော်လုပ်စားတတ်တဲ့ ငါးပိမပါ ရိုးရိုးလေး နဲ့လူတိုင်းလုပ်စားနိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုမျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
၄) ငရုတ်ဆုံ (စက်နဲ့ လုပ်ရင်လဲ ရပါတယ်လေ)
ပထမဆုံး ကြက်သွန်ဖြူအားအရင်ထောင်းပါ (သင့်လျှော်သလောက် (စားကုန်နိုင်သလောက်ပေါ့))။ ကြက်သွန်ဖြူ ကြေမွသွားလျှင် ငရုတ်သီးထည့်ကာထောင်းပါလေ။ ငရုတ်သီးကြေသွားသောအခါ ဆား၊ ဟင်းချိုမှုန့်ထည့်ကာ အပေါ့အငံ စိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ။
၄င်းနောက် ပန်းကန်ထဲခပ်ထည့်ကာ သံပုရာသီး ညှစ်ထည့်လိုက်ပါက ချဉ်ချဉ် စပ်စပ်နှင့် အလွန်စားကောင်းသော ငရုတ်သီးထောင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:15 AM No comments:
အချစ်ဆိုသာ ဘာလဲလို့ ကွာ?။
အချစ်ကိုကွယ် မတွေ့ မှာစိုး။
လိုက်လို့ ရှာရင်း အချိန်တွေပြောင်း
မိန်းမ၊ ယောင်္ကျား မာယာတွေများ
ကံကိုပုံလို့ငါပြောမှာကွာ
၀မ်းနည်းစွာနဲ့ကြိုးစားပေါ့လေ
တစ်နေ့ နေ့ မှာ တွေ့ မှာပါလေ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:45 AM No comments:
သူ့ ပြန်ကြားချက် ငါရချိန်မှာ
ဒါပေမယ့်လေ သူ့ ကိုမမှီ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:35 AM No comments:
promise တွေချန်ထား ခွင့်လွတ်မလား?။
နာကျင်ခြင်းကို အဖော်ဖက်လို့ 
ပြန်မတွေ့ အောင် အကြိမ်ကြိမ်ချွေ
အတွဲတွေ့ တိုင်း ၀မ်းနည်းမိတယ်
မခံပါနဲ့စိတ်ဆင်းရဲကို။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:21 AM No comments:
အချစ်တွေ့ တော့ ရင်မှာစွန့် ‘အ‘
သူပျော်ဖို့ ရယ် ငါကလိုက်လျော
သူပြုံးချိန်တိုင်း ငါလိုက်လို့ ပြုံး
ဖွင့်ပြောအောင်လဲ မစွန့် စားနိုင်
အောင်နိုင်ဖို့ သာ ကြိုးစားခဲ့ရင်း.....။
တောင့်တမိတယ် ပြန်တွေ့ ချိန်ဝယ်။
အသက်ကြီးလို့အချစ်ပေါ်လာ
ရယ်သံများသာ ငါ့ကိုလောင်ဖွဲ့ 
ရင်ခွဲပါလို့မပြောချင်ပါ
ငါပိုင်ဆိုင်တာ ၀မ်းသာနေလို့ ။
ပျောက်ပယ်သွားရင် ငါ့ရဲ့ အချစ်
အချိန်ဝေးကွာ မတွေ့ ရင်လဲ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:27 AM No comments:
သူပြောစကား အားလုံးယုံလို့ 
၀မ်းနည်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ ကာ
မင်းရဲ့ အချစ် လေအ၀င့်မှာ
ပျောက်ကွယ်သွားတော့ ခိုင်မာစွာနဲ့ 
ရှေ့ သာဆက်လို့မကြုံလိုပါ
ကျွန်တော့်ကို သစ်ပင်လို့ ခေါ်ကြတဲ့အကြောင်းက ကျွန်တော်က ပန်းချီဆွဲတာကို ၀ါသနာပါတယ်။ ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံးက သစ်ပင်တွေ ဆွဲရတာကိုပဲ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပန်းချီကားအောက်မှာ သစ်ပင်လေးတစ်ပင်က ကျွန်တော်ထိုးနေကျ
ဆိုင်း(Sign) အစား ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ကျောင်းတုန်းက ကျွန်တော် ရည်းစားအများကြီး ထားခဲ့ဖူးတယ်။ ရည်းစားတွေ အများကြီးထဲက ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်ချစ်ကြောင်း ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူမ မှာ တစ်ဖက်သားကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ လှပတဲ့ရုပ်ရည် ကိုယ်လုံးမရှိဘူး။ သာမန်မိန်းကလေးထဲက
ကျွန်တော် သူမကို ချစ်တယ်... တကယ့်ကိုချစ်တယ်... သူမရဲ့ ရိုးသားမှုကို ချစ်တယ်..
သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမူ၊ သူမရဲ့ အားနည်းချက်၊ သူမရဲ့ အားငယ်မှုတွေကို ချစ်တယ်။ ကျွန်တော် အပျော်သဘောနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ်၊ ကျွန်တော့်အတွက် မထူးခြားတဲ့ သူမက ကျွန်တော်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ထင်မှာစိုးလို့ ကျွန်တော် သူမကို ဖွင့်မပြောခဲ့တာပါ။ ချစ်ခဲ့ကြပြီးရင်လည်း နောက်ဆုံး ခွဲခွာရမှာစိုးလို့၊ ချစ်ခဲ့ကြပြီးရင် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ သူမကို ထိခိုက်အောင်ပြောမှာ ကြောက်လို့၊ တစ်နေ့ သူမကို ကျွန်တော် လုံးဝပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ထားမိပြီး တစ်ခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ တွဲချင်သေးလို့ သူမကို ကျွန်တော် ဖွင့်မပြောသေးတာလည်းပါတယ်။
ကျွန်တော် တစ်ခြားကောင်မလေးနဲ့ တွဲနေတာကိုကြည့်ပြီး သူမ ကျွန်တော်ဘေးမှာ သူငယ်ချင်းလို့ (၃)နှစ်အတူရှိ နေခဲ့တယ်။ (၃)နှစ်လုံးလုံး သူမခံစားခဲ့ရတယ်။ ခံစားနေတာတွေကို ကျွန်တော် မသိအောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သူမကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ပါးနပ်တဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပဲလေ.. တစ်ခါက ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့
ကျောင်းအဆောင်ဘေးမှာ ချိန်းတွေ့ပြီး နမ်းနေကြတာကို သူမနဲ့ ပက်ပင်းတိုးမိတယ်။ သူမက ဟန်ဆောင်ရယ်ရင်း go on ဆိုပြီး ထွက်ပြေးသွားတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ သူမရဲ့ မို့မောက်နေတဲ့ မျက်လုံးဟာ ညတုန်းက ဘယ်လောက်ခံစားပြီး ငိုထားရတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဘာကြောင့် မျက်လုံးမို့နေတာလည်းဆိုတာကို မသိကျိုးကျွံပြုပြီး မမေးတဲ့အပြင် သူမကို လှောင်ရီနေမိတယ်။
ကျောင်းဆင်းလို့ လူတွေအားလုံးပြန်ကြတော့မှ သူမ စာသင်ခန်းထဲမှာ ခိုးငိုနေတာကို ဘောလုံးကျင့်ရင်း ပစ္စည်းတစ်ခု မေ့ကျန်လို့ ပြန်လာယူတဲ့ ကျွန်တော် စာသင်ခန်း အပြင်ဖက်မှာ သူမငိုနေတာကို တစ်နာရီနီးနီး ရပ်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကို သူမ မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့ နံပတ်(၄)ယောက်မြောက် ကောင်မလေးက သူမကို မလိုလားမနှစ်မြို့ခဲ့ဘူး။ တစ်ခါက သူတို့နှစ်ယောက်
အကြီးအကျယ် စကားများကြတယ်။ သူမရဲ့သိမ့်မွေ့တဲ့ စရိုက်က လူတွေကို ရန်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော့်ကောင်မလေးဖက်ကနေပြီး သူမကို ဟောက်လိုက်မိတယ်။ မျက်ရည်တွေကျရင်း သူမကျွန်တော်ကို ကြောင်ကြည့်နေတယ်။ သူမရဲ့ မျက်ရည်ကို လျစ်လျူရှုရင်း ကျွန်တော့်ကောင်းမလေးလက်ကို ဆွဲပြီး စာသင်ခန်းပြင် ဖက်ထွက်သွားလိုက်တယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ သူမက ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ စရင်းနောက်ရင်း အရင်လိုပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။ သူမ ဘယ်လောက် ခံစားရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ပိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို သူမ
ကျွန်တော်(၅)ယောက်မြောက် ကောင်မလေးနဲ့ လမ်းခွဲတော့ သူမကိုခေါ်ပြီး စိတ်ပြေလက်ပျောက် ထွက်လည်ကြတယ်။ "ငါ နင့်ကို ပြောစရာရှိတယ်"ဆိုတော့.. အတော်ပဲ ငါလည်း နင့်ကို ပြောစရာရှိတယ်လို့ သူမက ဆိုတယ်။
"သူ"ဆိုတာ ဘယ်သူလည်းဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေး သူမကို ချစ်ခွင့်ပန်ထားတာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ သန်မာဖျတ်လတ်ပြီး သွက်လက်သွက်လက် ချစ်စရာ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမကို အသဲအသန် ပိုးပန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခံစားသွားရတယ်ဆိုတာ သူမ မသိအောင်ဟန်ဆောင်ရင်း၊ ကြားရတာ ၀မ်းသာကြောင်း ပြောလိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော် ဟန်ဆောင်မှုကို ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ ရင်မှာနာကျင်နေတာတွေ ရင်ဝမှာ တစ်ခုခုနဲ့ လာဖိထားသလို ခံစားရတယ်။ အသက်ရှု မ၀တော့ဘူး။ တအားအော်ဖို့ ကြိုးစားတာ အသံတွေက လည်ချောင်းဝမှာ ထစ်ဆို့နေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ငိုမိတယ်...ချုံးပွဲချ ငိုမိတယ်..... သူမ ချုံးပွဲချငိုတာကို အကြိမ်ပေါင်းမနည်း ကျွန်တော် ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
စာမေးပွဲတွေပြီးလို့ ကျောင်းပိတ်တော့မဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ရက်မှာ ကျွန်တော့်ဖုန်းထဲမှာ message လေး တစ်စောင်ရှိ နေတာကို သတိထားမိတယ်။ ရက်စွဲကိုကြည့်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)ရက်က ကျွန်တော်ချုံးပွဲချငိုခဲ့တဲ့ ရက်လေးပါ။ ဖွင့်ကြည့်ဖို့ ကျွန်တော်မေ့နေခဲ့တာပါ...
"သစ်ရွက်လေးကြွေတာ လေရဲ့ ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်လား သစ်ပင်က နေခွင့် မပေးလို့လား"
ကျောင်းတုန်းက သစ်ရွက်လေးတွေ စုဆောင်းတာကို ၀ါသနာပါခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သစ်ရွက်လေးတွေဟာ နှစ်ရှည်လကြာ မှီခိုခဲ့တဲ့ သစ်ပင်ကို ခွဲထွက်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိလို့ပဲ။ ကျောင်းတုန်းက ကျွန်မနဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ သမီးရည်းစားလို့မဟုတ်ဘဲ တကယ့်သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်လို ခင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူပထမ ရည်းစားရတော့ ကျွန်မမှာ မရှိအပ်တဲ့ သ၀န်တိုမှု၊ ရင်ထဲက နာကျင်မှုတွေ ခံစားခဲ့ရတယ်။ (၂)လလောက်နေပြီး သူတို့ပြတ်သွားတော့ ပျော်ရွှင်မှုတွေ
သူမသိအောင် ကျွန်မ ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်လအကြာမှာ သူ ဒုတိယမြောက်ရည်းစား ရသွားပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့....သူဘာလို့ ကျွန်မကို ဖွင့်မပြောသေးတာလဲ....
သူရည်းစားတစ်ယောက် ပြောင်းတိုင်း ကျွန်မရင်တစ်ခါနာရတယ်...ခံစားရတယ်....
တစ်ခါခါ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သံသယဖြစ်မိတယ်။ ကျွန်မကပဲ သူ့ကို တစ်ဖက်သတ် ချစ်နေမိတာလား..
သူရဲ့အကြိုက်တွေ အကျင့်တွေ ကျွန်မအပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေ ကျွန်မ ကောင်းကောင်း နားလည်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ မိန်းကလေးကပဲ အရင်စ ဖွင့်ပြောရမလား ဆိုတာကို ကျွန်မ မခန့်မှန်းတတ်ခဲ့ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.... သူဖွင့်ပြောလာမဲ့ရက်ကို မျှော်ရင်း ကျွန်မသူ့ ဘေးမှာပဲ ရှိနေချင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကိုပဲ ဂရုစိုက်ချင်တယ် ချစ်ချင်တယ်။ ညည သူ့ဖုန်းသူ့ message ကို မျှော်နေရသလိုပေါ့။ သူဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်တွေရှုပ် မအားတဲ့ကြားက ကျွန်မအတွက်တော့ အချိန်တစ်ချိန် သူချန်ထားတတ်သေးတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိနေတယ်လေ...
ဒီလိုနဲ့စောင့်စားရင်း (၃)နှစ်လုံးလုံး သူ့ဘေးမှာ ကျွန်မရှိနေခဲ့တယ်။ စောင့်မျှော်ရတာဟာ ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်။ လက်လွှတ်ချင်ပေမဲ့လည်း ရောက်ရှိလာမဲ့ ရက်ကို ကြိုတွေးပြီး ကြည်နူးရင်း ဆက်စောင့်မျှော်နေချင်တယ်။ ဒီလိုပင်ပန်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်းတွေဟာ (၃)နှစ်လုံးလုံး ကျွန်မနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ဖြေဖို့ နီးလာတော့ တခြားအခန်းက ကောင်လေးတစ်ယောက် ကျွန်မကို အသဲအသန်ပိုးပန်းတယ်။ စစချင်းမှာ ကျွန်မ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးဟာ ကျွန်မ နှလုံးသားရဲ့ နေရာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို တဖြေးဖြေး စိုးမိုးလာခဲ့တယ်။
ကောင်လေးဟာ နွေးထွေးတဲ့ လေလိုပါပဲ... ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားသစ်ရွက်ကို လှုပ်ခါအောင် တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတယ်...
နောက်တော့ ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားတစ်နေရာစာ မကတော့ပါဘူး ကျွန်မရဲ့ နာကျင်ခြင်း၊ စောင့်စားခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ နှလုံးသား သစ်ရွက်လေးကို လေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်မဲ့နေရာကို ကောင်လေး ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်လိုက်မိတယ်။ သစ်ရွက်လေး သစ်ပင်ပေါ်က ကြွေကျသွားခဲ့ပါပြီ။ သစ်ပင်ကတော့ပြုံးနေတယ် နေခဲ့ပါလို့လဲ
"သစ်ရွက်လေးကြွေတာ လေရဲ့ ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်လား သစ်ပင်က နေခွင့်မပေးလို့လား"
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်စနိုးနဲ့ သစ်ရွက်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ သူမက သူချစ်တဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်မှာ ခံစားချက်တွေ ဖုံးကွယ်ရင်း မှီခိုပြီးနေတယ်။ ကျွန်တော် လေလုပ်ရတော့မယ်။ သစ်ရွက်လေး ပျော်ရွှင်အောင် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ လေလုပ်ရတော့မယ်။ ကျွန်တော် သူမကို စပြီး သတိထားမိတဲ့ အချိန်ဟာ ကျွန်တော် ဒီကျောင်းပြောင်းလာပြီး တစ်လအကြာမှာပါ။
သေးငယ်တဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်လုံးနဲ့ ဘောလုံးကွင်းဘေးမှာ ထိုင်ရင်း မျက်စိတစ်စုံဟာ ဘောလုံးကျင့်နေတဲ့ ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကို
စူးစိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်။ သူမတစ်ယောက်ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူမအဲဒီနေရာလေးမှာ ထိုင်ပြီး ငေးကြည့်နေတတ်တာ အားကစား အချိန်တိုင်းပဲ။ ကောင်လေးက တစ်ခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ ရယ်မောနေရင်
သူမရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့... ကောင်လေး သူမဖက် လှည့်လာပြီဆိုရင် သူမရဲ့ မျက်လုံးအိမ်မှာ အပြုံးစတွေနဲ့... သူမအဲဒီကောင်လေးကို အမြဲ စောင့်ကြည့်နေတတ်သလိုပဲ၊ သူမကို အမြဲစောင့်ကြည့်ရမဲ့အလုပ်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
တစ်နေ့တော့ ထိုင်နေကျနေရာလေးမှာ သူမကိုမတွေ့လို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ စိုးရိမ်မှုတွေဝင်ရောက်လာတယ်။ ဘယ်လို စိုးရိမ်မှုမျိုးလည်းဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောမပြတတ်ဘူး။ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ သူမ အမြဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကောင်လေးလည်း
ရှိမနေလို့ ကျွန်တော် စိတ်မချတာနဲ့ သူမရဲ့ စာသင်ခန်းဖက်ကို ပြေးလာခဲ့မိတယ်။ အထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကောင်လေးရဲ့ ဆူပူသံ၊ သူမရဲ့ ရှိူက်သံ ကောင်လေးရဲ့ ထွက်ခွာသံကို ကြားမြင်ခဲ့ရတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ သူမဟာ အရင်ကလိုပဲ ဘောလုံးကွင်းဘေးမှာ ကောင်လေးကို ငေးနေပြန်တယ်။
ကျွန်တော် သူ့ဘေးကို လျောက်သွားပြီး ပြုံးပြလိုက်တယ်။ နောက် စာရွက်တစ်ရွက် ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ သူမက အံသြတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တယ်။ နောက်ပြုံးပြီး စာရွက်ကို ယူလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ စာရွက်ခေါက်လေးကို ကိုင်လို့ ကျွန်တော်နား သူမရောက်လာတယ်။
အဲဒီလို သူမနဲ့ စာအပေးအယူလုပ်ပြီး နောက်ပိုင်း သူမတစ်ဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော်ကို စကား ပြန်ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်တွေကို လက်ခံတတ်လာတယ်။ ဖုန်းခေါ်ရင်လည်း ပြန်ပြောတတ်လာတယ်။ သူမ ကျွန်တော့်ကို မချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ ကျွန်တော့်ကို ချစ်လာနိုင်တဲ့အထိ ကျွန်တော် ဇွဲလုံလရှိခဲ့တယ်။
သူမနဲ့ သိခဲ့တဲ့ (၄)လအတွင်း ကျွန်တော့်ချစ်ကြောင်းတွေ ဖွင့်ပြောခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မရေမတွက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောတိုင်း သူမ စကားလှမ်းကြောင်း လွှဲပစ်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် လက်မလွှတ်သေးပါဘူး။
ကျွန်တော်သူမကို အရမ်းချစ်နေမိပြီလေ.. ချစ်မိရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်လာတယ်.. သူမရဲ့ အချစ်ကို ရအောင်ယူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်မိတယ်။ သူမ မချစ်မှန်း သိလျှက်နဲ့ သူမအဖြေပေးလာမဲ့ ရက်ကို စောင့်စားရင်း ကျွန်တော်သူ့ဘေးမှာ
ကျွန်တော်နား ကျွန်တော် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ... "ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်နေပါတယ်" သူမ ပြန်အော်ပါတယ်...
ကျွန်တော် ဖုန်းကို ပစ်ချလိုက်တယ်။ အပေါ်အင်္ကျီကို ကောက်စွပ်ပြီး သူမအိမ်ဖက် ဆိုင်ကယ် အပြင်း မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ဘဲလ်ကို နိုက်လိုက်ပြီး သူမ ထွက်လာချိန်မှာတော့ သူမကို တင်းတင်းလေး
"သစ်ရွက်လေးကြွေတာ လေရဲ့ ခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်လား သစ်ပင်က နေခွင့်မပေးလို့လား"
ရှမ်းကလေး (ဤစာပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်းအား အထူးကျေးဇူးတင်လျက်)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:12 PM No comments:
ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောတိုင်း
ယုံမှားနေလား ချစ်ရဲ့ စကား။
message ပို့ တိုင်းလဲ ၀န်တွေကတို
Beer လေးသောက်တိုင်း မင်းကငြူစူ
မင်းကိုချစ်လို့ချစ်ပုံပေးလဲ
အချစ်ပိုတော့ ငါ့ရဲ့ အချစ်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:29 AM No comments:
တွေ့ ပါရစေ ဖူးစာလေးရယ်
နေ့ တိုင်းမျှော်ကိုး ဆုတောင်းနေစဲ
ဘယ်ချိန်တွေ့ မယ် မသိနိုင်တယ်။
နှစ်တွေပြောင်းလို့အသက်ပြောင်းလဲ
ချစ်မကွဲခင် တွေ့ မြင်ချင်တယ်
မင်းကိုယုံလို့အသဲပုံချင်
တွေ့ တဲ့နေ့ မှာ အချစ်ပုံမှာ
နေ့ စဉ်ရက်စက် အသဲကွဲလို့ 
ကြယ်သာကြွေလို့ဘာမှမကျန်
ခံရခက်လို့အော်မြည်နေလဲ
နှလုံးခံစား တွေ့ ချင်မိတယ်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:40 AM No comments:
မင်းနဲ့ ငါ တစ်အိမ်မှာနေလဲ
ငါတို့အမုန်းပွားနေတယ်ပေါ့လေ။
ငါနဲ့ အတူရှိချိန် မင်းစိတ်မပျယ်ရင်
ငါက သာလို့ဝမ်းနည်းတယ်ကွာ။
မင်းနဲ့ အတူ ငါကပူပန်လို့ 
မင်းကစိတ်ပူ သ၀န်တိုလို့ 
ငါ့ရင်ခွင်ကစကား ဘယ်သူ့ ကို ပန်ကြားရမလဲဟင်?
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:42 AM No comments:
၁) သူစားသောအစားအစာက ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်သီးပါတယ်လေ။
၂) သူများပေးတဲ့ လက်ဆောင်က ဘူးတွေ၊ စက္ကူတွေ ၊ ပန်းတွေ ပြန်ပြန်ပြီးသုံးတတ်လေရဲ့ ။
၃) သွားကြားက ညှပ်နေတဲ့ အစားအစာလေးတွေကို ကလိ၊ ကလိ အသံမြည်အောင် လျှာနဲ့ ကလော် တတ်ပြန်ရော။
၄) လေယာဉ်ကွင်းမှာတော့ အိတ်ကြီးကြီး နှစ်လုံးကြားမှာ ရပ်နေတတ်ပြန်တယ်။
၅) ပါတီဆိုရင်လဲ နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက် နောက်ကျပြီးလာတတ်တယ်လေ ပြီးတော့ တာကပုံမှန်လို့ထင်ပြန်ရော။
၆) အိမ်သာထဲမှာလဲ Plastic ပုံးလေး ဆောင်တတ်သေးတယ်ဗျာ။
ရ) ကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုလဲ ကာရန်ညီညီပေးထားတယ်ဗျာ မြတ်နိုး၊ မြတ်မိုး၊ မာလာ၊ သီတာ၊ တာယာ ပေါ့လေ။
၈) အဲ..... အစားအစာ မစားရနယ်မြေတွေမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်မုန့် လေးတွေ ဆောင်တတ်တယ်လေ။
၉) မပြန်ခင် သူများအိမ်ရှေ့ မှာရပ်ပြီး တစ်နာရီကျော်ကျော် ရပ်ပြီးစကားပြောတတ်လေရဲ့ ။
၁၀) မိသားစုပိုင်ကားလေးကို ပစ္စည်းတင်နိုင်သလောက် သူတို့ က တင်တတ်တယ်။
၁၁) အိမ်က ပစ္စည်းမှန်သမျှကို ပလတ်စတစ် ပတ်ထားတတ်တယ်ဗျ။ ကွန်ထိုး၊ တီဗီ၊ ဆိုဖာ ကအစေပေါ့လေ။
၁၂) သင့်မိဘက သူငယ်ချင်းများပြောသည်ကို နားမထောင်ရန် သတိပေးပြီး ဆွေမျိုးများ တမျိုးထင်မည့်အရာများကို မလုပ်ခိုင်းတတ်ဘူး။
၁၄) ဘယ်သွားသွား နေရာတိုင်းမှာ ထမင်းအိုးတော့ ဆောင်တတ်တယ်လေ။
၁၅) အရေးကြီးရင်တောင်မှ အဝေးဖုန်း မခေါ်တတ်ဘူးဗျ။
၁၆) အိမ်မှာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်ချိန်ရောက်ရောက် မိဘတွေက ဖုန်းဆက်ပြီး ထမင်းစားပြီးပြီလားလို့မေးတတ်တယ်လေ။
၁၇) မင်္ဂလာပွဲမှာ တက်ရောက်တဲ့သူ 600 ထက်နည်းရင် ၀မ်းနည်းတတ်ပြန်ရော။
၁၈) စာဖတ်သူများ ရယ်မောနေမယ်ပေါ့လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာဖတ်သူလဲ ဒီလိုဖြစ်နေလို့ ပေါ့ဗျာ။ ( ဟဲဟဲ)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:59 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:57 AM No comments:
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:56 AM No comments: